Chii chandinoda kuita patent zano: matanho aunofanirwa kutora | Ehupfumi Zvemari
Zvese kuSpain uye nekupasi rose kune vanhu avo, pane imwe nguva muhupenyu hwavo, vane zano rakajeka. Dambudziko nderekuti haugone kutaura nezvazvo pasina munhu akakubira iwe. Muchokwadi, inenge isiri nguva yekutanga; pane zviitiko zvakawanda munhoroondo yepasi rose yevanhu vakabira patent kune vamwe nekuda kwekuti vakavimba nekutaura vasati vaita mapepa.
Naizvozvo, kana iwe uine zano, kana kufunga kuti zvingave zvakadaro, iwe unofanirwa kuziva nzira yekudzivirira zviri pamutemo, nekudaro uchidzivirira vamwe vanhu vari kunze kwako kuti vasvike pamberi pako nekutsika zano. Iwe unoda kuziva sei? Nhasi tinotsanangudza maitiro patent zano.
1 Chii chinonzi patent
1.1 Pane chero chinhu chinogona kupihwa patent?
2 Iko kupi patent zano
3 Chii chandinoda kuita patent zano
3.1 Chikumbiro chepamutemo
3.2 Pasa pre-bvunzo
3.3 Patent kunyorera mune dzimwe nyika
3.4 Tsvaga mushumo patent zano
3.7 Nhanho yekupedzisira patent zano
4 Iyo patent inogara nekusingaperi here?
5 Zvinodhura zvakadii patent zano
Chii chinonzi patent
Zvinoenderana neSpanish Patent uye Yekutengesa Hofisi, patent iri "Zita rinocherekedza kodzero yekushandisa zvakasarudzika zvigadzirwa, kudzivirira vamwe kubva mukugadzira, kutengesa kana kuishandisa pasina mvumo yemuridzi".
Izvi zvinoreva kuti patent izita rinoratidza kuti ndiwe muridzi wepfungwa iyoyo kana mucherechedzo uri kunyoreswa, uye kuti izvi zvinoshanda mune imwe nyika (kana pasirese kana zvakumbirwa pasi rese).
Iye zvino, ndiyo chete nzira mugadziri anofanira kuchengetedza mazano ake uye panguva imwechete kumusika navo.
Pane chero chinhu chinogona kupihwa patent?
Kana zvasvika pakubvumidza zano, isu tinofanirwa kukuudza kuti hazvisi zvese zvinokwanisa kuzviita. Mune mamwe mazwi, kune akati wandei zvinodikanwa zvaunofanira kusangana nazvo kuti zano rako rive rinobvumidzwa.
Ita kuti ive nyowani. Unoda kuti izvo zvaitika kwauri hazvisati zvaitwa kare, kuti ndechimwe chinhu chepakutanga.
Izvo zvine hungwaru, ndiko kuti, icho hachisi chinhu icho munhu anogona kugadzira.
Izvo hazvisi zvisiri. Uye zvakare kuti zvinogona kuzadzikiswa.
Izvi zvinoreva kuti, kana iri dzidziso yesainzi, nzira yemasvomhu, mutemo, fomula yekudzidza, kunyangwe chirongwa chekomputa, haugone kuibvumidza. Chete mune yekupedzisira kesi ndipo pakave nehurongwa hwakafanana hwekupa patent, asi chinhu chakajairika ndechekuti zvirongwa zvacho hazvina patent registry.
Zvisinei, kuvandudzwa kana kuvandudzwa kwechigadzirwa kunogona kuve patentable.
Iko kupi patent zano
MuSpain, kune masangano maviri uko iwe unogona patent zano. Izvi ndeizvi:
Iyo Spanish Patent uye Yekutengesa Hofisi, inozivikanwa nechidimbu cheayo OEPM. Inotarisira kodzero dzepfuma yezvivakwa patent uye zvishandiso mamodheru, akasiyana masikirwo uye dhizaini.
Iyo yeIntellectual Property Registry. Iri pamusoro pemapatent ane chekuita nemabasa ekunyora uye ehunyanzvi.
Zvichienderana nerudzi rwepfungwa iwe yaunoda kuchengetedza, unofanirwa kuenda kune imwe nzvimbo kana imwe. Muchiitiko chechipiri, nhanho dziri nyore zvikuru kubva mushure mekubhadhara mari uye nekukumbira, mumazuva mashoma chete ichave iine kodzero uye kodzero yebasa iri ichazivikanwa zviri pamutemo.
Iye zvino zvawava kuziva kwaunofanirwa kuenda patent zano muSpain, iwe unofanirwa kuziva chimwezve chaunoda patent. Kunyanya, iwe unofanirwa kuenda ne:
Unogona kuwana izvi kuOEPM. Asi, mukuwedzera, inofanirwa ine data remunyoreri, tsananguro yezano, zvirongwa, madhirowa, masiketi ... Muchidimbu, zvese zvinodiwa kuongorora iyo patent uye kukwanisa kuongorora usati wambobvuma kana kuramba chikumbiro.
Kana zvinyorwa zvaunopa zvikagamuchirwa, nhanho inotevera ichave yekumisikidza zuva rekunyora. Zuva iro iwe uchafanirwa kuuya uye kuzopa iro zano iro pacharo, kuti vagone kuriongorora. Muchokwadi, a usati waongorora kuti uone kuti zvese zvakanyatsonaka.
Patent kunyorera mune dzimwe nyika
Panguva imwechete iyo pfungwa iri kuyedzwa, unogona kufunga nezvekushandisa iyo patent mune dzimwe nyika, ku kukuchengetedza pasi rese. Kana chiri chinhu chinogona kushandura nyika, zvinokurudzirwa kuita maitiro aya, kunyangwe zvingave zvakadhura zvakadii, nekuti mabhenefiti ari kuzokura kupfuura iwo mutengo.
Tsvaga mushumo patent zano
Usati wagamuchira iyo patent, inoenderana inoita basa rekutsvaga mazano akafanana neako, kuti uone kana paine chimwe chinhu chepamutemo chinokanganisa maitiro ako.
Mushure memwedzi gumi nesere yekushandisa patent, manejimendi anokwanisa anozoita kuti patent yako ive yeruzhinji, uye panguva Mwedzi mitanhatu unogona kusarudza kana uchienderera mberi nazvo (uye unozviita munyika ngani) kana kuti unorega.
Kana iwe ukaita iyo yekupedzisira, maitiro acho anenge apera panguva iyoyo, uye iwe ucharasikirwa nekodzero kune iyo patent (sezvo usati wasvika kumagumo).
Kana iwe ukaenda kumberi kune patent imwe pfungwa, saka chinhanho chinotevera chichava chekuisa zano rako pamberi pevaongorori vatatu vanozo riongorora zvakakwana kuti vaone kana iri patent-yakakodzera. Kuti uite izvi, unofanirwa tevedzera zvinodiwa zvinokumbirwa maererano neEuropean Patent Convention.
Nhanho yekupedzisira patent zano
Kana iwe ukapasa bvunzo dzepashure dzakadzama, ipapo chiziviso chinoburitswa muRusununguko Gazeti reIntellectual Property (BOPI) yeOPM ichiita kuti patent ishande kubva pazuva rimwe chetero.
Iyo patent inogara nekusingaperi here?
Zvinosuruvarisa kwete. Iyo patent chete ichadzivirira pfungwa yako kwenguva yemakore makumi maviri. Yekutanga yemakore iine dziviriro yepasi rose (inokwenenzverwa kwemamwezve mwedzi gumi nesere kana iwe uchikumbira kuburikidza neChibvumirano chePatent Cooperation. Mushure menguva iyoyo, iyo bvumidzwa ichapera.
Uye zvakare, iwe unofanirwa kuziva kuti iwe unofanirwa kuchengetedza iyo patent, uye izvi zvinoreva kubhadhara mari yegore rega inokwira sekufamba kwenguva. Semuenzaniso, gore rekupedzisira patent iwe waizofanira kubhadhara kutenderera mazana mazana matanhatu emadhora.
Zvinodhura zvakadii patent zano
Imwe pfungwa yakakosha yaunofanirwa kugara uchifunga patenting imwe pfungwa ndeyekuti maitiro aya haana mahara. Uye kwete zvakachipa kana.
Kuti uwane kunyorera patent, zvinodawo kubhadhara mari yepamutemo, iyo inokwira gore gore. Pari zvino, mutengo weiyo patent yekushandisa fizi ingangoita makumi manomwe neshanu euros.
Kune izvi une chikwereti wedzera Mushumo paHurumende yeArt, ndiko kuti, gwaro rine ndangariro inotsanangudza pfungwa iyo inogadzirwa ne data rese rinodiwa. Uye haina kudhura, nekuti inogona kuita mutengo unosvika mazana manomwe emaeuro.
Kana iwe uchida iyo kushandiswa kwepamutemo kwepamutemo, uchafanirwa kubhadhara mamwe makumi manomwe neshanu euros, uye anopfuura mazana gumi nemaviri euros maererano neshumo nyowani yenyika nyanzvi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Negocios » Chii chandinoda kuita patent zano